Samsung hanambara ny daty fandefasana ny Galaxy S8 ao amin'ny MWC | Vaovao momba ny gadget
Manuel Ramirez | | General, About us
Ny MWC amin'ity taona ity somary mikorontana izy. Ny tsy fisian'ny Samsung Galaxy S8 dia tena miharihary rehefa tamin'ny taona lasa dia zatra nahalala ny zava-drehetra momba ity telefaona ity isika fa tao anatin'ny herinandro maromaro dia efa tonga tany amin'ny fampiratiana ivontoerana fiantsenana.
Na dia manana aza i Samsung ny Galaxy Tab S3 ho takelaka premium izay haseho ao amin'ny MWC, manana izany tsiro marikivy izany isika. Mba tsy ho malina loatra ny Kaongresy Iraisam-pirenena Momba ny finday, maniry ny mpanamboatra Koreana offset ny refy miaraka amin'ny fanambaràna ny daty famotsorana Galaxy S8. Mieritreritra aho fa tokony hianina amin'izany isika.
Araka ny filazan'ny iray amin'ireo gazety Koreana manan-danja indrindra ao amin'ny firenena, Samsung dia hanambara ny daty fandefasana ny Galaxy S8 amin'ny 27 Febroary, amin'ny andro tena hanokanan'ny MWC 2017 ofisialy ny varavarany.
Vao tsy ela akory izay dia efa nianatra isika fa Samsung dia hanambara ny Galaxy S8 amin'ny faha-29 Martsa ary fanombohana eny an-tsena afaka iray volana taty aoriana, amin'ny 21 aprily. Ankehitriny dia tsy maintsy hiandrasantsika ny hahafantaran'ny MWC tsara ny tena daty marina ary raha hamafisina ireo omena amin'ny tsaho samihafa.
Ny Galaxy S8 dia miandry anao a terminal misy fanatsarana lehibe ary fiasa vaovao. Ny tsaho farany dia manondro fa hanana Galaxy S8 mahazatra kokoa miaraka amin'ny efijery 5,8-inch, ary iray hafa, ny Galaxy S8 +, izay hahatratra 6,2 santimetatra eo amin'ny efijery.
Ny efijery an'ny maodely roa dia hanana izany lantom-peony miolakolaka mankamin'ny sisiny izany ary hanana ny kalitaon'ny fibodoana ny ankamaroan'ny habaka frontal eo amin'ny finday avo lenta izy ireo. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra dia ny hampiavaka azy amin'ny chip Qualcomm Snapdragon 835 vaovao, amin'ny endriny amerikanina toy ny nitranga tamin'ny fanontana an-telefaona teo aloha niaraka tamin'ny Galaxy S6 sy Galaxy S7.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Samsung hanambara ny daty fandefasana Galaxy S8 ao amin'ny MWC
Apple dia nanangana fanambarana iPhone 7 Plus vaovao telo